Kuridza Makadhi, Tarot Kadhi, Oracle Makadhi - Wangjing
Kasino Kutamba Makadhi
Plastiki Kutamba Makadhi
Kusimudzira Kadhi Kutamba
Yakadhindwa Kadhi Game
Zvishandiso zvinoenderana nemakadhi
Tarot Makadhi Tsika Yakadhindwa ...
Tarot makadhi Inogona kuongorora, kufanotaura uye kupa zano pane zvakasiyana zvinodiwa senge rudo, kushamwaridzana hukama uye ...
Rider Tarot Kadhi Dhodhi
Sirivhi Edging Rider Tarot Kadhi Deck WJPCC inodada nekuve yakaburitsa akawanda anozivikanwa tarot makadhi. Vazhinji maartist vanosarudza 350g ...
Tsika Yakadhindwa Kutamba Mutambo ...
Makadhi emitambo Akanakira hofisi, kubuda, kutasva kwemotokari uye mapikicha, hapana saizi yakarongedzwa yemutambo wekadhi kadhi uye yakawanda ye ...
Kushambadzira Kutamba Makadhi
Kushambadzira poker kunonzi zvakare kuzivikanwa poker, chipo poker, kukurudzira poker. Iyo inochengetedza nhamba dzekona uye co ...
Yakagadzirirwa Dhizaini Cardistry ...
Maitiro ekuita yakanakisa kadhi yekuverenga kadhi kadhi? WJPCC inoziva zvakawanda. Isu tinoita chete yepamusoro-yepamusoro kadhi yekutamba ...
Pedzisa yako wega dhiza yemakadhi nezvigadzirwa zvedu kuti zviite nyanzvi yekutengesa kutengesa kana zvimwe zvirongwa. It wil ...
Chigadzirwa template kuiswa
Mirage Dhiza yeKuridza Makadhi
Mazwi ekiyi: WJPC, WJPCC, kutamba makadhi, kadhi kemakadhi, makadhibhodi, kutamba makadhi, mashiripiti ekutamba makadhi, mashura, bhotoro kupera, kubhadhama $ 19,017! Yakawana budiriro huru paKickstarter zvakare, Mirage Deck yeKutamba Makadhi, dhizaina iro rakadhindwa neWJPC. WJPC yave mutengesi wesarudzo f ...
Q: Ndingaite here mamwe samples yekuedza kana kugadzira yangu samples?
A: Ehe unogona. Tine sarudzo nhatu dzemasampula. 1.Free samples emakadhi edu emakadhi decks anowanikwa, iwe unongofanirwa kubhadhara mutengo wekutumira. 2.Digital kudhinda samples: asina kubikwa mashitsi ane yako mifananidzo Kusanganisira kadhi chiso, kumashure uye tuck bhokisi, dijitari samples ruvara runogona kungoenderana neye offset kudhinda nezve70% -80%. 3. Yakarongeka sampling (sampuli yemuviri). Zvakafanana nechigadzirwa, ruvara rwemuenzaniso runogona kuenderana nemuvara wechigadzirwa nezve 90-95%
Unotumira / kununura pasirese here?
Hongu! Isu tinotumira chero kwese kupoterera nyika. Isu tinopa DHL, Fedex, UPS, mhepo uye hove zvinotakura ngarava, tizivise yako kero yekutumira kuti tikwanise kutarisa mutengo kwauri.
Chii chinonzi MOQ yako? Ini ndinogona kugadzira makadhi pasi pe MOQ yako?
Yedu MOQ ndeye mazana mashanu emadhiza eimwe shanduro.Yes, tinogona kugadzira makadhi pasi pemazana mashanu emadhiza sekukumbirwa, asi mutengo wakazara wakaenzana nemadhadha mazana mashanu, izvo zvinoita kuti dhizari imwe neimwe ive inodhura uye ndosaka tichikurudzira zvikuru kuti urongedze mazana mashanu.